ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: September 2011
***** ငယ် .မောင်ပါ။ မောင် ကြားချင်တဲ့ စကားပြောမှာလား ပြော..
(နုငယ်) အင်း. ပြောမှာ.
*****ဟာ တစ်ကယ် .................ဒါဆို ခုပြောတော့
(နုငယ်)အင်း.. ဘယ်ကနေစပြောရမလဲ ဆိုတော့ ။ ဒီလိုရှိတယ်လေ
**** ဟိတ် မညစ်ပတ်ကြေးကွာ.. တော်ကြာ ဟိုတစ်ခါလို ဖုန်းကဒ်ကုန်သွားအုန်းမယ်
(နုငယ်) ဟားဟာဟား... အင်းပါ နောက်တော့ ဘူး မောင့် သဘောအတိုင်းပါပဲ ရှင်။ မောင်ပြန်လာတာနဲ့ ငယ်တို့ လက်ထပ်ကြမယ်။ခုထဲ ကငယ် အလုပ်ထွက်စာ တင်ထားလိုက်တော့ မယ်။ ကဲ ကျေနပ်ပြီးလား။
******* ကျေနပ်ပြီ ကျေနပ်ပြီ အမေ့ ဆီကို ဖုန်းဆက်မယ်။ နုငယ် နဲ့ အမေ နဲ့ မောင်ပြန်မလာခင်စီစဉ်စရာ ရှိတာ စီစဉ်ထားတော့ နော်။ ခု မောင်ပြန်လာဖို့ က ၆လပဲ လိုတော့ တာလေ။ ဒီဇင်ဘာမှာ မောင်တို့ မင်္ဂလာဆောင်မယ်။ပြီးရင် ဟန်းနီးမွန်း ခရီး ဘယ်ကိုထွက်မလဲ။ ပြီးတော့ မောင့် အစီအစဉ်အတိုင်း နုငယ်နဲ့ မောင်အတွက် လတိုင်းစုထားတဲ့ ဘဏ်အကောင့်ထဲက ပိုက်ဆံတွေထုတ်ပြီး မောင်တို့ ရဲ့ ချစ်အိမ်လေးကို ၀ယ်ဖို့ ငယ် ရန်ကုန်ပြန်ပြီး အိမ်လိုက်ရှာတော့ ။ အချိန်ဆွဲမနေနဲ့ နော်။ မောင်ပြန်လာမှ စီစဉ်ဆို နောက်ထပ် သုံးလေးလ စောင့်ရအုန်းမှာ ..စောင့်နိုင်တော့ ဘူး လွမ်းလှပြီ
(နုငယ်)မောင်.. အကွက်စေ့ လှချည်လားလို့ ။ ဘယ်ထဲက စဉ်းစားထားလဲ မသိဘူး ။တစ်ကယ်ပဲ။
***** ဟားဟား အဲဒါနုငယ်ဆီက အကျင့် ပိုးကူးတာလေ။ ငယ်က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စနစ်တစ်ကျ စီစဉ်တတ်တာ မဟုတ်လား။ ဟော... ငယ် ဖုန်းကဒ်ကုန်တော့ မယ်ထင်တယ်။ မောင် ပြန်မခေါ်တော့ ဘူးနော်။ အိမ်ကိုလည်း ဖုန်းဆက်ရအုန်းမှာ မို့ လို့။ ငယ်ကို လွမ်းတယ်။ ပြီးတော့ ချစ်တယ်ငယ်။
(နုငယ်) အင်းပါ။မောင်ရဲ့ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်..ပြီးတော့
ဟော ဖုန်းကျသွားပြီ။ စကားပြောချိန်လေးနည်းလိုက်တာ..
ဒီလိုနှင့် မောင်ပြန်လာမယ့် ရက်တွေနီးလာလေ။ ကျွန်မရင်တွေပိုခုန်လာလေပေါ့။ မောင်နှင့်ကျွန်မတို့ နေမယ့် တစ်ထပ်တိုက် ခြံဝန်းလေးနှင့် အိမ်လေးလည်း ၀ယ်ထားပြီးပြီ။ ပြီးတော့ အိမ်ထဲကို ထည့်မယ့် ပစ္စည်းတွေလည်း ၀ယ်ပြီးနေရာချထားပြီးပြီ။ ကျွန်မလည်း အလုပ်ကတရားဝင်ထွက်စာမရသေးပေမယ့် ခွင့်ရက်ရှည်ယူလိုက်ပြီး မောင့်မေမေနှင့် အတူ စီစဉ်စရာရှိတာတွေ လိုက်စီစဉ်။ မမောနိုင် မပန်းနိုင်။ အိမ်က မေမေကဆို ၀တ်ဖို့ အ၀တ်အစား အားလုံး သူကိုယ်တိုင်စနစ်တစ်ကျ လိုက်စီစဉ်ပေးသည်။ ဒီလိုမျိုး မေမေကပါ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနှင့် အသာတစ်ကြည်ဆိုတော့ ကျွန်မရဲ့ ပီတိ ပြောပြရင် ရင်ထဲက အရှိအတိုင်းတောင် မီမယ်မထင်ဘူး။ မောင်ကတော့ ဒီကြားထဲ ခဏခဏ ဖုန်းဆက်လို့ လွမ်းတဲ့ စကား တွေပြောသည် မြန်မြန်ပြန်လာချင်နေတဲ့ အကြောင်း အပ်ကြောင်းထပ်အောင်ကိုပြောနေတော့ သည်။ ထပ်ပါစေလေ ကျွန်မလည်း ကြားချင်နေတာပဲ ဟာကို.အဟင်း
(ဒေါ်ကြူ) သမီးရေ ..အေး ဘယ်မှာလဲ အိမ်မှာလား။ အေး အမေ့ ဆီခဏလာခဲ့ ပါလား။ ဒီမှာ လေ သမီးအဖေကြီးက သမီးတို့ ဖို့ ကုတင်နဲ့ မွေ့ယာဝယ်မလို့ လေ။ အဲဒါ သမီးမကြိုက်မှာစိုးလို့ ။ ကားလေးငှားပြီး တစ်ချက်လောက်လာကြည့်ပါလားသမီးရယ်။
(နုငယ်) ဟုတ် မေ.. သမီးခုထွက်ခဲ့ မယ်။ ဘယ်နေရာလည်းပြောလေ အင်း..သြော်ဟုတ်ပြီး ဟုတ်ပြီး သမီးအဲဒီနေရာကို သိတယ်မေ။ ခုထွက်လာခဲ့ မယ်နော်။
(ဒေါ်ချို) သမီး ဘယ်သူဖုန်းဆက်တာလဲ။
(နုငယ်) မောင့်ရဲ့ အမေပါ ။ ကုတင်နဲ့ မွေ့ ယာဝယ်ပေးမလို့ လေ။ သမီးတို့ အတွက် အဲဒါ ကြိုက်မကြိုက်လာကြည့်ပါဆိုလို့ ။
(ဒေါ်ချို) အင်း ကောင်းပ။ သမီး..
(ဒေါ်ချို) သမီးလေးရွေးချယ်တဲ့ လမ်းမှန်တယ်။အမေ့ နည်းနည်း အတ္တကြီးသွားတယ်။ ပြီးတော့ သမီးကိုယ်တိုင်ကလဲ ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာမှ သမီးလုပ်သင့်တာကို လုပ်တယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ သမီးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အမေ မှားသွားတယ် သမီး။ လူငယ်တွေရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးသင့်တယ် ပြီးတော့ လမ်းညွန်ပေးရုံ လမ်းပြပေးရုံဆို လုံလောက်ပြီး ဆိုတာ အမေ နားလည်သွားပြီ။ တစ်ကယ်တော့ အတင်းအကြပ် သွန်သင်ညွန်ပြတယ်ဆိုတာ အမေကိုယ်တိုင်လည်း ပင်ပန်းသလို သွန်သင် ညွန်ပြခံရတဲ့ သူ အတွက်လဲ ပင်ပန်းတယ်လေ။သမီး မှန်ပါတယ်။
(နုငယ်) ဟင့်အင်း အမေကတော်တာပါ ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သားသမီးကို ဘယ်လိုနေရမယ် ဘယ်လိုထိုင်ရမယ် ဆိုတာ ဆုံးမစရာမလိုပဲ ကိုယ့် ကိုယ်ထိန်းတတ်အောင် သင်ပေးနိုင်တဲ့ အမေ ကပိုတော်တာပါ။ သမီးက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေ့ ကိုချစ်ပါတယ် အမေ။
ဒီလိုနှင့် မောင်နဲ့ ဆုံဖို့ ရက်တွေ ပိုပိုနီးလာသည်။ မောင်က ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ ပြန်ရောက်မည်။ မင်္ဂလာဆောင်ကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ မှာစီစဉ်ထားသည်။ ပြီးတာနှင့် ဟန်းနီးမွန်းကို မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ဘုရားတွေ လျှောက်ဖူးမည်။ ပြီးတော့ နောက်ဆုံးပြန်ကာနီးမှ ချောင်းသာကမ်းခြေကို တစ်ရက်နှစ်ရက်ဝင်နားလိုက်မည်။ မောင်တို့ အိမ်မှ ကားနှင့်ဒရိုင်ဘာထည့်ပေးလိုက်မည်တဲ့ ။ ကဲ ဘာလိုသေးလည်း။ အခက်အခဲတွေ ကျော်ပြီးမှ ရလာတဲ့ အချစ်ရဲ့ အနှစ်သာရက ချိုမြိန်လွန်းလှသည်။ ခုဆိုမောင်ပြန်လာရန် ၃ ရက်သာလိုတော့ သည်။ မောင်နဲ့ ပြန်တွေ့ ရတော့ မည်။ ပြီးတော့ ဒီတစ်ခါ မောင်ပြန်လာရင် အရင်က ခဏတာမှေးမိတ်ဖို့ မှီခဲ့ တဲ့ မောင့်ရဲ့ ပုခုံးလေးကို ကျွန်မ အပိုင်စားရတော့ မည်။ အဟင်း.. ပျော်လိုက်တာ..ဒါဟာ အချစ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုပေါ့။
မောင်ပြန်လာဖို့ ၃ ရက်တာကာလကို စောင့်နေရတာပင် ကျွန်မအတွက် သုံးကမ္ဘာလောက်ကြာအောင် စောင့်နေရသည်ဟုပင် ထင်မိသည်။ ကြာလွန်းသည်။ ကြာလွန်းနေသည်။ မောင်ရေ..မြန်မြန်သာ ပြန်လာပါတော့ . ဒီမှာ မျှော်ရတာ လည်ပင်းတောင် တော်တော်ရှည်နေပြီ မောင်ရဲ့ ။ ပြီးရင် အနာဂတ်မှာ မောင့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမည်။
အော်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် လက်ထပ်ပြီးရင်မောင်က ပြည်ပကိုထပ်ပြီးမထွက်တော့ ဘူးတဲ့ ။ ဒီမှာပဲ စီးပွားရေးလုပ်တော့ မယ်တဲ့ ။ မောင်နဲ့ လည်း နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပြီး ဝေးစရာမလိုတော့ ။ အို ဘယ်လောက်လှလိုက်တဲ့ အနာဂတ်လည်း .. စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးမဆုံး။ ဟောကြည့် စဉ်းစားရင်း မျက်ရည်တို့ က ကျလာပြန်သည်။ အဟင်းဟင်း ၀မ်းသာလို့ ကျတာဖြစ်မယ်။ ပျော်လွန်းလို့ ။ မောင်ပြန်လာမှ ဟောဒီကျနေတဲ့ မျက်ရည်တွေ အတွက် အရော ပြန်တောင်းပစ်မယ်။ သူမစဉ်းစားရင်း မျက်ရည်တွေ ကိုသုတ်ပစ်နေပြန်သည်။
ဒေါ်ချိုတစ်ယောက် ၀ယ်ထားသော အိမ်သစ်လေး၏ အိပ်ခန်းထဲ ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်း မျက်ရည်လေး ကျလာလိုက် လက်ကိုင်ပုဝါလေးနဲ့ သုတ်လိုက်။ ပြီးရင် တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်နှာက ပြုံးလာလိုက်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ငိုမယ့် မယ့် ဖြစ်လာလိုက်နှင့် သမီး လေးကိုအခန်းပေါက်ဝမှ လှမ်းကြည့်ရင်း ရင်ထဲမှာ လှိုက်ကနဲ ဖြစ်လာသလို မျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်တို့ ပြည့်လျှံလာခဲ့ သည်။ သမီးကြားမှာစိုး၍ အသံမထွက်အောင် ခြေကိုအသာဖေ့ါနင်းပြီး အိမ်ရှေ့ ခန်းကို ပြန်ထွက်လာခဲ့ သည်။
(ဒေါ်ချို)သား.. ကိုသုရယ် မင်းညီမလေးကို ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်နေတော့ မှာလားဟင်.. အန်တီရင်ထဲမှာ မချိလိုက်တာကွယ်။ သမီးလေးရဲ့ ကံကိုက ဆိုးလွန်းတယ်ပဲ ပြောရမလား။ ဆရာဝန်ကြီးတွေကရော ဘာပြောသေးလဲ သမီးလေး အခြေအနေကိုလေ။ ခုဆို သမီးလေး ဒီလိုဖြစ်နေတာ နှစ်နှစ်ကျော်ပြီ။
(ဒေါ်ကြူ) ဟုတ်တယ် သား .သားညီမလေး အခြေအနေလေ..
ကိုသု ခေါင်းကို အသာရမ်းလိုက်ရင်း
(ကိုသု) ဘာမှကို သိပ်ပြီး မထူးခြားလားဘူး။ ငယ်ရဲ့ စိတ်ကိုက အဲဒီညီလေးထွန်းသစ် ပြန်မလာခင် ၃ ရက်ကိုပဲ စွဲနေတာ။ ငယ်ရဲ့ စိတ်ကိုက အဲဒီ ၃ ရက်ပြီးနောက်ပိုင်းကို လက်မခံချင်ဘူးဖြစ်နေတာ ။ ကျွန်တော်လည်း ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ညီမလေးကို ဂရုစိုက်ပေးပါ့မယ်။ ဘာမှ အားမငယ်ပါနဲ့ အန်တီရယ်နော်. ကျန်းမာရေးလဲ ဂရုစိုက်။ အန်တီ တို့ တော်တော်ပိန်သွားတယ်။
(ဒေါ်ကြူ) ဘယ်လိုများပြောလိုက်ပါလိမ့် သားရယ်။ သားနဲ့ သမီး နှစ်ယောက်လုံးဆုံးရှုံးသွားမှတော့ ဒီအမေတွေက ဘယ်လိုများ ၀ဖြိုးနေနိုင်အုန်းမလဲ။အန်တီကိုယ်တိုင် သားတစ်ယောက်လုံး..
ဒေါ်ကြူပြောရင်း အသံတို့ တိမ်ဝင်သွားသည်။
(ဒေါ်ချို) သြော် သားမနက်ဖြန် သားလေးထွန်းသစ်ဆုံးတာ နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ နေ့ လေ အဲဒါ အိမ်မှာ ဆွမ်းကပ်တရားနာပြီး သားလေးထွန်းသစ် အတွက် ရေစက်ချ အလှူပွဲရှိတယ် လာခဲ့ အုန်းနော်။
မကြူရယ် ငိုမနေပါနဲ့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်တိုင်လည်း သမီးတစ်ယောက်လုံး....
ဒေါ်ချိုတစ်ယောက်လည်း ပြောရင်း ရှိုက်သံတို့ ရောစွက်သွားသည်။
အမေနှစ်ယောက်လုံး၏ ခပ်အုပ်အုပ် ရှိုက်သံများ အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ပျံ့ လွင့်နေသည်။ ကိုသုကတော့ ဖြင့် သက်ပြင်းခပ်ရှည်ရှည်ကြီးကို ကြိတ်ရှိုက်လိုက်ယုံမှ တစ်ပါး သူဘာမှ မတတ်နိုင်ပါလေ။ ကံကြမ္မာကိုသာ အပြစ်ပုံချလိုက်ချင်သည်။
ထွန်းသစ်တစ်ယောက် ပြန်ကာနီး နှစ်ပတ်အလိုတွင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲ၌ ထိခိုက်မှုဖြစ်သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားပြီထဲက သတိပြန်မလည်လာခဲ့ ။ ပြန်လာကာနီး သုံးရက်မြောက်တွင် ထွန်းသစ်ဆုံးသည်ဟုသော သတင်း ရန်ကုန်ကို ရောက်လာခဲ့ သည်။ ထိုသတင်းစစကြားချင်တော့ နုငယ် ငိုနေရုံမှ လွဲပြီးဘာမှ မထူးခြား ။ ထွန်းသစ်၏ အရိုးပြာအိုးအား လေဆိပ်မှာ သွားယူသောနေ့ တွင်တော့ နုငယ် တစ်ယောက် ၄ ရက်တာမျှ သတိလစ်မေ့ မျှောသွားခဲ့ သည်။ ပြန်လည်သတိရလာသော်လည်း
နုငယ်၏ စိတ်ထဲတွင် ထွန်းသစ်ပြန်လာဖို့ ၃ ရက်သာလိုတော့ သည့် ကာလ အပိုင်းအခြားကိုသာ မှတ်မိတော့ သည် ။
ဒီလောက်ထိ အခက်အခဲတွေ။ မျှော်လင့်ချင်းတွေ။သံသယတွေ။ ယုံကြည်ချက်တွေ အများ ကြီးကျော်ဖြတ်လာခဲ့ ပြီး ပန်းတိုင်ကိုရောက်ခါနီးမှများကွာ။ ဒီလိုသာ အဆုံးသတ်ကြေးဆိုရင် အစထဲက ဘာလို့ ပေးဆုံနေသေးလည်။ ဘာလို့ များ ချစ်ချင်းရဲ့ လွမ်းချင်း ဆွေးချင်း တမ်းတချင်းတွေကို ခံစားနေရသေးလည်း။ ခုတော့ အခက်အခဲ အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ တဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကိုမှ ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့ ကွာ။ ညီလေးရေ မင်းလည်း ဒီလိုကြီးထားခဲ့ ရတာ ဘယ်စိတ်ချနိုင်မလဲ။ ဒါပေမယ့် အစ်ကို ကိုယ်တိုင်မှ ငယ့် စိတ်ကို မကုစားနိုင်ပဲ။ အစ်ကိုလည်း ငယ့် ရဲ့ ဒုက္ခကို ထိုင်ကြည့်နေရုံကလွဲပြီး ဘာမှကို မတတ်နိုင်ဘူးကွာ။
ငယ်နဲ့ ညီလေးတို့ ရဲ့ ဘ၀ ၀ဍ်ကြွေးတွေများရှိခဲ့ ရင်လည်း ဒီဘ၀ ဒီမျှနဲ့ သာ ကြေကြပါစေတော့ ညီလေးနဲ့ ညီမလေးရာ.
အချစ်ကြောင့် ပျော်ရသည်။ ဘ၀တွေ ပြောင်းလဲလာရသည်။ ကြည်နူးခဲ့ ကြသည် ။ သာယာခဲ့ ကြသည်။ လွမ်းကြ ။ဆွေးကြ။ ချစ်ကြ။ မျှော်လင့်ချင်းအိမ်မက်တွေ တူတူ မက်ခဲ့ ကြ။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ တစ်ချို့ သော သူတွေအတွက် အချစ်သည် ပျော်ရွှင်ချင်းတွေ သယ်ဆောင်ပေးခဲ့ ပေမယ့် တစ်ချို့ တစ်ချို့ သော သူတွေ အတွက်တော့ ဒဏ်ရာတွေ အပြည့်နဲ့ နှလုံးသားတစ်ခု ကိုရင်မှာပိုက်ပြီး အသက်ရှင်နေကြရပြန်တယ်။
ချစ်ခင်ရပါသော ဘလော့ မောင်နှမများ ကျန်းမာလို့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။
အပိုင်းရှည်ကြီးကိုရေးပြီး တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကို အကြာကြီးနေမှ တင်..တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ပို(စ်) ရှည်ရှည်လေးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ပြီးဆုံးအောင် ဖတ်ပေးကြလို့ ကျေးဇူး အထူးပင် တင်မိပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။
ခု ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးပြီးသွားပြီးမို့ ဖတ်ပြီးသွားရင်ဖြင့် ကျွန်မရဲ့ အရေးအသားကို အားမတမ်း စိတ်ထဲမှာရှိသလို ဝေဖန်ပေးကြပါလို့ လည်း ပန်ကြားပါရစေနော်.။
ပုံလေးကိုတော့ google ကနေပြီးတော့ ပဲ ရှာပြီးသုံးထားတာပါ။
Posted by ဆွေလေးမွန်4comments
မြန်မာ့ သမိုင်းမှ မပျောက်ကွယ်စေချင်သော ဧရာဝတီ
ဒီဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရဲ့ အကျိုးမည်မျှလောက်ရနိုင်သည်။ မည်မျှလောက်တိုးတက်နိုင်သည် ဆိုသည်ကို ကျွန်မမသိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနှင့် ချစ်သောဧရာဝတီကိုတော့ ပျောက်ကွယ်မသွားစေချင်တာ ရင်ထဲက တစ်ကယ့် ဆန္ဒအမှန်ဖြစ်သည်။
ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာစာသင်လို့ မြန်မာပြည် မြေပုံလေးကိုဆွဲ အလယ်ဗဟိုက ဧရာဝတီမြစ်ပုံကောက်ကြောင်းလေးကိုထည့်။ အားလုံးပြီးသွားတဲ့ အခါ မြေပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လျှင်
အရှေ့ ဘက် ရှမ်းကုန်ပြင်မြင့်ဘက်မှ အတောင်ပတ်ခတ်ကာ လှပနေသောပုံ။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသ လေး၏ ခါးလေးကော့ ကာ ကနေသောပုံ အလယ်ဗဟိုမှ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းပုံလေးနှင့် ကြည့်မ၀ ရှုမ၀။
ခုတော့ ဖြင့် နောင်လာနောက်သား အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လေးများ အလှည့်ကြလျှင်ဖြင့် ဧရာဝတီဆိုတာ မြေပုံတောင် ထောက်ပြစရာမရှိ ဖြစ်မှာကို တော့ တစ်ကယ့် ကို စိုးရိမ်မိပါသည်။
မြန်မာပြည်ဟေ့ ဆိုလျှင် အဓိက မြစ်ကြီးမှာ ဧရာဝတီမြစ် ကြီးတစ်ခုသာရှိသည်။ ဧရာဝတီကိုနောက်ခံသော သမိုင်းများစွာလည်းရှိခဲ့ ဘူးသည်။ ဧရာဝတီ၏ လှပသော သဘာဝများအားလည်း ကဗျာတို့ ဖြင့် သီကုံးခဲ့ ကြသည်။ ခြယ်မှုန်းခဲ့  ကြသည်။ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန်အပြည့်ဖြင့်လည်း ဒါ ငါတို့ ဧရာဝတီဟုလည်း မည်သူမဆို ၀င့်ကြွားခဲ့ ကြဖူးသည်။
ခုတော့ တို့ ခောတ် တို့ခါ တို့ အလှည့်ကြမှ ..
ကို . ကွယ်ပျောက်ရတော့ မည် ဆိုတာဖြင့် ရင်နာစရာကောင်းလှသည်။
မနှစ်ကမိုးနဲ တာမို့  ဧရာဝတီ မြစ်ကြမ်းပြင် သောင်ထွန်းလို့ မြစ်တွေ ကျဉ်းမြောင်းလာတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းဖတ်မိရုံလေးကိုဖြင့် စိုးရိမ်စိတ်တို့ က ရိပ်ကနဲ။
ခုတော့ ဖြင့် ကွယ်ပါပျောက်အုန်းမယ်ဆိုတော့
မြန်မာလူမျိုး မြန်မာ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်နေရဲ့ သားနဲ့
ဘယ်လိုနှလုံးသားမျုိး ဘယ်လိုမျိုးချစ်စိတ်မျိုးနဲ့ များ
မြန်မာ့ သမိုင်းကို ဘယ်လိုဆောင်ပြီး
တို့ မြန်မာကို ဘယ်လိုချစ်မလဲ လို့ ပဲ မေးလိုက်ပါရစေ...
အကျိုးရလာဒ်က မည်မျှပင်ဖြစ်နေပါစေ ဧရာဝတီရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး များကို သေချာပြန်စဉ်းစားပြီ သေချာတွက်ချက်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
Posted by ဆွေလေးမွန်9comments
အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း - ၁၁)
နွေနေပူပူကို အံတုပြီး ငုဝါပန်းလေးများ ၀င်းဝင်းဝါ၀ါနှင့်လှပနေကြသည်။ မျက်စိပသာဒ ရှိလိုက်ပါဘိ။ နေရောင်ခြည်ကျရောက်မှုများလေလေ ငုဝါပန်းလေးများ၏ ၀ါဝါအရောင်လေးတွေကလည်း ပိုပြီးတောက်ပလာလေလေပေါ့။ တစ်ခုတော့ ရှိသည် ငုဝါပန်းလေးများ ဒီလိုဝင်းဝါပြီး တစ်ပင်လုံး ထိန်တောက် ကာ လှပနေဖို့ အတွက် သူတို့၏ သစ်ရွက်စိမ်းလေးများကိုတော့ ရွက်ဝါလေးတွေအဖြစ်နှင့် မြေခပြီး ကြွေကျလိုက်ရရှာသည်။ ဒါမှပင် တစ်ပင်လုံးဝင်းဝါလို့ လှနေတော့ မည်လေ။ အဲ. ဒီလိုမှ မခြွေခဲ့ ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ခြားအပင်တွေ ၀င်းဝါနေတုန်းမှာ ဒီပင်တစ်ပင်တည်း စိမ်းလို့ သာနေတော့ မည်။ အေးပေါ့လေ တစ်ခုလိုချင်လျှင်တော့ တစ်ခုစွန့် ရတော့ မှာပေါ့။ အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသည် အဘယ်မှာရှိမည်နည်း။ ဒါဟာ သဘာဝရဲ့ လောကနိယာမပင်။ အရာရာ အားလုံးပြီးပြည့်စုံပြီနေပြီဆိုလျှင် လိုချင်တောင့်တခဲ့ သော ဆန္ဒတစ်စုံဆိုသည့် စကားသည် ဤလောကကြီးတွင် အဘယ်မှာရှိတော့ မည်နည်း။ ဒါဟာ သဘာဝပေါ့ ။ သဘာဝပေါ့။
ဒါဆိုလျှင် ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကရော ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ရမည်ကို အဘယ့် ကြောင့်ဒီပင်တစ်ပင်တည်း စိမ်းချင်နေမှန်းမသိ။ ကျွန်မသဘာဝကိုများလွန်ဆန်နေတာလား။ ကိုယ့် နှလုံးသားကို ဒုတိယတစ်ကြိမ် ညာနေတာလား။
(ဆရာကောင်း) အင်း ဧကန်နတော့ ဧကန်နပဲဟေ့။ ဆရာမ ဒေါ်နုနုငယ်တို့ အပြင်က ပွင့်နေတဲ့ ငုဝါပန်းတွေ ကြည့်ပြီး ငယ်ချစ်ကိုလွမ်းနေပြီထင်တယ်။ ဒီလောက်လဲ ပိုမနေပါနဲ့ ဗျာ ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာဆို ပြန်လာမယ် ဆိုတာ ကြားထားပြီးသား။ သတင်းကတော့ ခိုင်လုံတယ်ဗျ။
(နုငယ်) အဟင်း..ဟုတ်တော့ ဟုတ်တာပေါ့ ဆရာရယ် .ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ဒီလို တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အချိန်တွေ အင်အားတွေ ဘယ်လောက်ထိ ရင်းနှီးခဲ့ ရတယ်ဆို တာ ဆရာလည်းသိသားပဲ။ လက်ထပ်ပြီးရင်လည်း မောင်တစ်ရွာ မယ်တစ်မြို့ ဖြစ်နေမှတော့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ဘာအနှစ်သာရမှာရှိမှာ မဟုတ်တော့ ဘူးလေ။
(ဆရာကောင်း) ဒါဆိုလည်း အလုပ်..
(နုငယ်) အလုပ်ထွက်လိုက်ဖို့ ကျတော့ လဲ နှမျှောတယ် ။ သူပြည်ပကိုထွက်သွားတယ်ဆိုတာကလည်း ကျွန်မက ဒီနယ်ဘက်ကို တာဝန်ကျတာမို့ မောင်တစ်ရွာ မယ်တစ်မြို့ ခွဲပြီးနေရမယ့် တူတူဆိုပြီး..
(ဆရာကောင်း) သြော် သူ့ ဘက်က ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်ပေးသွားတာပေါ့။ ခုကျတော့ ဆရာမက ..
(နုငယ်) ကျွန်မတစ်ခုခုကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ရတော့ မှာပေါ့။ အချစ်ကိုယူမလား ကျွန်မ နှစ်သက်မြတ်နိုးလွန်းတဲ့ အလုပ်ကို စွန့် မလား.. တစ်ခုခုပေါ့။
(ဆရာကောင်း) အေးဗျာ မိန်းကလေးဆိုတော့ လည်း ယောင်နောက်ဆံထုံးပါရမှာကိုး။ စဉ်းစားပေါ့ဗျာ ဘ၀အတွက်ရော အချစ်အတွက်ရောပေါ့..
(နုငယ်) ဟုတ် ကျေးဇူးပါပဲဆရာ။ ဒါဆို ကျွန်မကို ခွင့်ပြုပါအုန်းနော်။ အတန်းချိန်တွေ ပြီးပြီမို့ အဆောင်ပြန်ပြီး ခဏလောက်နားနေလိုက်အုန်းမယ် ဆရာ.
(ဆရာကောင်း) ကောင်းပါပြီဗျာ ကောင်းပါပြီ
မောင်နှင့် ၄ နှစ်ကျော်ကျော်ခွဲခွာနေပြီးပြီမို့ မောင့် ကိုလွမ်းပါသည်။ ပြန်တွေ့ ရမှာမို့ လည်း ကြည်နူးမိသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့် .. ဟင်း..............
အဆောင်ပြန်သူမ ရေချိုးပြီး ကုတင်ပေါ်ခဏလှဲနေလိုက်မိသည်။ မှေးကနဲ.. သူမ အိပ်ပျော်သွားမိသည်။
ဘေးနားရှိ သူမ၏ လက်ကိုင်ဖုန်းလေး မြည်သံကြောင့် သူမလန့် နိုးလာခဲ့ သည်။
***** ဟလို ..ဟလို ငယ် လား။ ငယ် အားတယ် မဟုတ်လား။ မောင် စကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ ။ ကျောင်းမှလား အဆောင်မှာလား။
(နုငယ်) အဆောင်မှာလေ။ ပြောလို့ ရပါတယ် မောင်ရဲ့ ပြောလေ။ ငယ်လည်း ဒီနေ့ မောင့် ကို အရမ်းလွမ်းပြီး သတိရနေတာ.
******ငယ်ကသာ ဒီနေ့ မှ မောင်ကနေ့တိုင်း အချိန်တိုင်း။ ငယ့် ကိုချစ်လွန်းလို့ သာ ငယ်ဆန္ဒတွေကို လိုက်လျောထားရတာ။ ကဲပါ ဒါတွေ မပြောတော့ ပါဘူး။ မောင် ဒီဇင်ဘာပြန်လာဖြစ်တယ်။ သေချာပြီ။
ခုသဘောင်္ကပ်ကမ်းခဏ ကပ်တုန်း ဖုန်းကဒ်ဝယ်ပြီး ဆက်လိုက်တာ။ မောင်ပြန်လာတာနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်မှာနော်. ငယ် နော်..
(နုငယ်) အင်းပါ မောင်ရယ် မောင်ဒီကိုပြန်ရောက်မှ အေးအေးဆေးဆေးစီစဉ်ပြီး ပြောကြတာပေါ့။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်နော် မောင်.. အစစအရာရာ သတိထားနော်။
*****အင်းပါကွာ.. မောင်ကြားချင်တာ ဒီစကားတွေ မဟုတ်ဘူးလေ.ကွာ။ ငယ်လည်းသိသားနဲ့ ။
မောင် ငယ်ကို အရမ်းချစ်တာ ငယ် သိတယ်ဟုတ်.. လွမ်းလည်းအရမ်းလွမ်းနေပြီကွ။ ခင်ဗျားလေးလို ကျွန်တော့် အသည်းက သံမဏိအသည်းမဟုတ်ဘူး သိလား။
(နုငယ်) အဟင်း မောင်ကလေ။ ငယ့် အသည်းလည်း မမာပါဘူးမောင်ရယ်
** ** အင်း ဟုတ်ပါတယ် ။ ပြန်မပြောနားမထောင် ခေါင်းကတော့ တော်တော်မာတယ်။
(နုငယ်) အင်းပါ ဟုတ်ပါတယ်.. ဟင်.. ဟလို..ဟလို ..ဟလို
ပြောနေရင်း ဖုန်းကကျသွားပြီ။ဘာမှကိုမပြောလိုက်ရဘူး။ မောင် ကြားချင်တဲ့ စကားလေးတောင် မပြောလိုက်ရဘူး။ မောင်များ ဖုန်းပြန်ခေါ်အုန်းမလားသူမ ဖုန်းလေးကိုကြည့်လိုက် ပြန်လှဲနေလိုက် နှင့်
ဂဏှာမငြိမ်။ ထိုင်ရမလို ထရမလို။ ဖုန်းကလည်း ပြန်မခေါ်ဘူး။ ကျွန်မမှာ ပြောစရာ စကားတွေ ကျန်သေးတယ်။ စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင် ကျွန်မ၏ အတွင်းစိတ်လေးများကို မြင်လာရသည်။ ဒီလောက်လေးတောင် ဒီလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုလျှင် မောင်နှင့် တစ်သက်တာခွဲဖို့ အရေးဆိုလျှင် ..
ကျွန်မ နှလုံးသားကို ဖြစ်သင့်တာဖြစ်ချင်တာတွေနှင့် ချည်နှောင်မှုများရပ်သင့်ပြီ။ ကျွန်မ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံလိုက်ဖို့ ကောင်းပြီး ။ မညာသင့်တော့ ဘူး ။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်မ မောင့်ရဲ့ ဇနီးကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်ပဲ နေတော့ မည်။ ထက်မြက်သည့် မိန်းမတစ်ယောက် မဖြစ်ချင်တော့ ဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အရည်အချင်းတွေ အားလုံးက မောင့်အတွက် support လုပ်ပေးမယ့် အရာတွေပဲ ဖြစ်ရတော့ မည်။ ကျွန်မချစ်သောသူအတွက် ကျွန်မအရာအားလုံးကို ပေးဆပ်လိုက်တော့ မည်။ နှလုံးသားကို ကျွန်မလှလှပပကြီး အရှုံးပေးလိုက်တော့ မည်။ မောင်ဒီတစ်ခေါက်ဖုန်းဆက်ခဲ့ လျှင် .ကျွန်မရဲ့ ပြတ်သားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အား ပြောပြလိုက်တော့ မည်။ ဒါဆိုလျှင် မောင် အရမ်းပျော်သွားလိမ့် မည်။
ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်ပင် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးသွားသလို ခံစားရသည်။ အနှောင်အဖွဲ့ တစ်ခုမှ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ သလိုပင်။ အတွေးတို့ နှင့် ပင် သူမအပျော်လွန်ရင်း ပြန်လည်အိပ်ပျော်သွားမိသည်။ နောက်တစ်နေ့ နံနက်သည် သူမအတွက် အလွတ်လပ်ဆုံး အပေါ့ပါးဆုံးနှင့် ရွှေရောင်လွှမ်းသော အနာဂတ်များ၏ အစဖြစ်တော့ မည်။
ဆွေလေးရဲ့ အမှာနှင့် နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
ချစ်စွာသော ဘလော့ မောင်နှမများ ကျန်းမာလို့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။
ဆွေလေးရဲ့ အပိုင်းဆက် ၀ထ္ထုလေးလည်း နောက်တစ်ပိုင်းဆိုလျှင် ဇာတ်သိမ်းပိုင်းဖြစ်ပါပြီ။ တစ်ကယ်တော့
ဒီအပိုင်းရှည်ရှည်လေးကို ရေးဖို့ စဉ်းစားထားပြီး စာကြမ်းတွေ ရေးထားတာကြာပါပြီ။ မထင်မှတ်စွာပဲ
အလုပ်တွေပိလာတာကတစ်ကြောင်း ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို လူနှစ်ယောက် Share ပြီးသုံးရတာက တစ်ကြောင်းတို့ ကြောင့် အပိုင်းဆက်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကို အကြာကြီးဖြစ်နေပါတော့ တယ်။ ဒီတော့ ဘလော့ လေးကို လာလည်ပြီး စာလာဖတ်ကြတဲ့ သူတွေ ကို မလေးစားသလိုဖြစ်နေပါတော့ တယ်။
အဲဒီအတွက်လည်း ဆွေလေး အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ် လို့ ပြောပါရစေ။
ပြီးတော့ ၀ါသနာအရ စာရေးသားတာက တစ်ကြောင်း နောက်တစ်ခုကတော့ ခုတစ်လော စာတွေ သိပ်မဖတ်ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း ပို့ (စ်) လေးထဲမှာ စာဖတ်ရတာများ ထောက်နေတဲ့ နေရာတွေများရှိခဲ့ တယ် စာရေးသားမှုများ အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ။
ခုတော့ ကွန်ပျူတာလဲ share စရာမလို အလုပ်ကိုလည်း ကိုယ်က နိုင်သွားပြီဖြစ်လို့ ဆွေလေးတစ်ယောက် အရင်လို စာတွေပြန်ဖတ်ပြီး စာတွေ ပြန်ရေးပါတော့ မယ်လို့ ။
နောက်တစ်ခု ခွင့်တောင်းချင်တာကတော့ ဒီပို(စ်)လေးရဲ့ နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးကို ဖတ်ပြီးသွားတဲ့ အခါကျရင် ဆွေလေးရဲ့ ရေးသားချက်များကို အားမနာတမ်း ဝေဖန်ထောက်ပြပြီး သင်ကြားပေးပါလို့ လဲ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
ပုံလေးကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း google ကပဲ ရှာပြီးသုံးထားပါတယ်။
Posted by ဆွေလေးမွန်0comments
အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း - ၁၀)
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်နေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သစ်ပင်အိုကြီးပေါ်မှ သစ်ရွက်ခြောက်လေးများ လေအဝှေ့မှာ ကြွေကြသံမှတစ်ပါး မည်သည့် အသံမျှမကြားရ။ ထိုသစ်ပင်အိုကြီး၏ရှေ့ တွင် မြေနီလမ်းလေးရှိသည်။ ထိုမြေနီလမ်း၏ တစ်ဖက်တွင် ငြိမ်သက်နေသော ကန်ရေပြင်ကြီးရှိသည်။ ထို့အပြင် ပင်အိုကြီးအောက်ရှိ ခုံတန်းလေး တွင် ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်လည်းရှိသည်။ ထိုကောင်မလေး၏ နောက်တွင်လည်း ခပ်တွေတွေနှင့် ငြိမ်သက်စွာ မတ်တပ်ရပ်နေသော ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိသည်။ ကောင်လေး၏ ခြေလှမ်းများသည် ရှေ့ သို့ ပထမတစ်လှမ်း နောက်တစ်လှမ်း ပြီးတော့ သုံးလှမ်းမြောက် ခဏမျှ ငြိမ်သက်သွားပြန်သည်။ ခဏမျှကြာတော့ ကောင်လေးပြန်လှုပ်ရှားလာသည်။ ကောင်လေးကျောခိုင်းလိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေသည်။ သို့ ပေမယ့် သူ့ခြေလှမ်းတို့ကနေရာမှ မရွှေ့ ။ ရှေ့သို့သာ ဆက်လှမ်းချင်နေမိသည်။ ကောင်လေး၏ လွန်ဆွဲပွဲအား ကောင်မလေးက တော့ မသိသည့်အလား။ နေရာမှာပင် မလှုပ်မရှပ်။ ကောင်လေး အံကိုတင်းတင်းကြိတ်လိုက်သည် ထို့နောက် လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်လိုက်ရင်း ခြာကနဲ နောက်သို့ လှည့်ထွက်သွားသည်။
ကောင်လေးကျောခိုင်းပြီးခဏမှာပင် ကောင်မလေးသည်လည်း ရုတ်တရက်ဖျတ်ကနဲ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး ကောင်လေးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားသို့ လှည့်လိုက်သည်။ ကောင်မလေး၏ မျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်တို့ ပြည့်လျှံနေ၏။ ပါးပြင်တွင်လည်း မျက်ရည်များဖြင့် ရွဲရွဲစိုနေ၏။ ကောင်မလေး၏ နှုတ်ခမ်းများတစ်ဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေ၏။ သို့ပေမယ့် မည်သည့်အသံမျှ ကောင်မလေးထံမှ ထွက်မလာ။ ကောင်လေး၏ ကျောပြင်မှုန်ပြပြသာ ကောင်မလေးမြင်နေရတော့ သည်။
(နုငယ်) ဒီတစ်ခါတော့ တစ်ကယ်ဝေးပြီ မောင်..ရယ်..တစ်ကယ်ဝေးပြီး
နှုတ်မှ တိုးတိုးရေရွတ်ရင်း နေရာမှာတင် ထိုင်ချရင်း ငိုနေမိသည်။ သေသွားတဲ့ ကျွန်မနှလုံးသား ကျွန်မအချစ်အတွက် ဒီလောက်တော့ ငိုလိုက်ပါရစေ။
(ထွန်းသစ်) ငယ်.. မောင် တို့ ကိုယ့် နှလုံးသားကို ကိုယ်တိုင်မညာကြေး ချစ်ကြရအောင်လား။ ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရသော အသံကြောင့် သူမအံ့သြသွားသည်။ မောင် သူမ၏ ဘေးနားမှာ မတ်တပ်ရပ်နေပါလား။ ခုနက မောင်တစ်ကယ်ထွက်သွားပြီးပြီမဟုတ်လား။
(နုငယ်) မောင် ခုနက ထွက်သွားပြီး မဟုတ်လားဟင်.
(ထွန်းသစ်) အင်း..ထွက်သွားပြီးပြီ။ နောင်တမရချင်ဘူး ငယ်။ ငယ် ကိုယ်တိုင်ကရော..
(နုငယ်) ငယ် ..ငယ်လဲ နောင်တမရချင်ပါဘူး မောင်.
သြော်..ခုတော့လည်း လောကကြီးလှသည် ။ ငြိမ်သက်နေသော ကန်ရေပြင်ရှိသည်။ အရိပ်ရသော ပင်အိုကြီးရှိသည်။ မြေကမ္မလာမှာ ဖွေးဖွေးလှုပ်နေသော သစ်ရွက်ဝါတို့ ရှိသည်။ ကွေ့ကောက်နေသော မြေင်္နီလမ်းလေးရှိသည်။ ပြီးတော့ ခုံတန်းလေးပေါ်တွင် အချစ်အကြောင်း တစ်ကယ်နားလည်သွားသော ချစ်သူနှစ်ဦး စကားမဆိုဖြစ်ပဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ထိုင်နေကြသည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့၏ မျက်နှာတွင် ပီတိအပြုံးတို့နှင့် ကြည်နူးနေကြသည်။ သြော် ခုတော့ လည်း လောကကြီးလှသည်။
ချစ်စွာသော ဘလော့ မောင်နှမများ ကျန်းမာလို့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။